Iyo Adventures yeTintin, pakati pemakomiki akakosha ezana ramakore rechiXNUMX | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Comics, Vanyori, Type, Vechidiki Mabhuku, Nyaya
Iyo Adventures yaTintin.
Kuvengwa kwaTintin comic yakagadzirwa neBelgian cartoonist Georges Remi (Hergé). Iri basa rinotariswa nevakawanda vanoongorora zvinyorwa seimwe yeanonyanya kudarika ma comics ezana ramakore rechi10 muEurope. Musi waNdira 1929, 24, yekutanga makumi maviri nemana ekuwedzera yakatsikiswa pamusoro pemakore makumi mana anotevera yakaonekwa ikashandurwa mumitauro inodarika makumi mashanu. Maitiro ayo ekutaurirana, kuenzana uye hushamwari ane hunhu husingaperi.
Zvisinei, maalbum aTintin - naHergé - haana kumbobvira apokana. Ivo vanopomedzerwa kurudyi-bapiro uye xenophobic maonero, ine tsananguro dzenyika, vanhu nemaguta, zvichibva pane zvinofungidzirwa. Izvi zvakaratidzirwa nedare rakamhan'arwa muna 2007 nemugari wemuCongo. Ndiani akakumbira kurambidzwa kwevhoriyamu Tintin kana Congo, yerusarura (Óscar Gual Boronat, 2011).
1 Nezve munyori, Georges Remi, Hergé
1.1 Kutanga kuburitsa
1.2 Kuonekwa kwaTintin naMilo
2 Iyo Adventures yeTintin albhamu
2.1 Tintin muNyika yeSoviet (1929 - 1930)
2.2 Tintin muCongo (1930 - 1931)
2.3 Tintin muAmerica (1932)
2.4 Nguruve dzaFarao (1933 - 1934)
2.5 Iyo Blue Lotus (1934)
2.6 Iyo Yakaputsika Nzeve (1935 - 1937)
2.7 The Black Island (1937 - 1938, 1943 na1965)
2.8 Tsvimbo yaOttokar (1938 na1947)
2.9 Munyika yegoridhe dema (1940, 1949 na1971)
2.10 Iyo Crab neGoridhe Claws (1940)
2.11 Nyeredzi Inoshamisa (1942)
2.12 Chakavanzika cheiyo Unicorn (1942 - 1943)
2.13 Red Rackham's Pfuma (1942 - 1943)
2.14 Iyo Inomwe Crystal Balls (1943 - 1944 uye 1946 - 1949)
2.15 Target: Mwedzi (1950 na1951)
2.16 Kumhara pamwedzi (1952 - 1953)
2.17 Iyo Calculus Affair (1954 - 1955)
2.18 Coke Stock (1956 - 1958 na1967)
2.19 Tintin muTibet (1958 - 1959)
2.20 Zvishongo zveCastafiore (1961 - 1962)
2.21 Ndege 714 kuenda kuSydney (1966 - 1967)
2.22 Tintin uye maRogues (1975 - 1976)
3 Tintin uye iyo Alfa Art
Nezve munyori, Georges Remi, Hergé
Georges Prosper Remi akaberekerwa muEtterbeek, Belgium, musi waMay 22, 1907. Zvidzidzo zvake zvekutanga zvakabatana nekuvandudzwa kweHondo Yenyika Yekutanga. Munguva yehudiki hwake aive chikamu che Vakomana Scouts veBelgium; gare gare, akapinda mu Sangano reCatholic Boy Scouts. Iyi shanduko - pamwe nechisungo chekuenda kusekondari mune yechitendero Institute, iyo Mutsvene Boniface- yakakonzerwa nekumanikidzwa nababa vake, Alexis Remi.
Sangano revasori uye chiKaturike zvine simba rakakura pahunhu hwake nebasa rake. Mifananidzo yake yekutanga yakaburitswa yakadzoka muna 1922, vakaonekwa mukati Le Mukomana-Scout, yakasainwa pasi pezita rekunyepedzera "Hergé" (kududzwa kwemavambo ake RG, muchiFrench). Remi akaenderera mberi nekupa zvipo zvine mutsindo kumagazini yambotaurwa yemwedzi nemifananidzo yezvinyorwa zvake uye, pane dzimwe nguva, butiro.
Mumagazini imwe chete iyoyo yakaburitswa (kubva muna Chikunguru 1926 kusvika kutanga kwa1930) Totor, CP yemabhururu, akafunga hurukuro yake yekutanga yepamutemo. Gore rakapfuura, Remi akabatanawo semubatsiri kupepanhau rinochengetedza kereke. Le XXème Scièle. Basa raakakanganisa pakati pegore ra1926 nekupera kwa1927 achishanda muchiuto muFirst Regiment yevavhimi netsoka.
Kuonekwa kwaTintin naMilo
Musi waNdira 10, 1929, Tintin naiye Fox terrier, Snowy, mune yekuwedzera yevechidiki Le Petit Vingtième de Sciele. Muchokwadi, ndezve hunhu hwake Totor - aine mamwe mavara ezita rake akachinjwa - akatendeuka mutori wenhau uye akatumira nemumwe wake canine shamwari kuSoviet Union. Yaive yekutanga pane makumi maviri nemaviri maalbhamu angaite iwo akakurumbira uye ane nharo makomiki e Iyo Adventures yaTintin.
Hergé mamwe mabasa anozivikanwa ari Iyo Adventures yaJo, Zette naJocko (5 maalbum) uye Quique uye Flupi (12 maalbum). Ose maviri mazita akagadzirwa akafanana neTintin, asi iwo haana kutenderera kweBelgian mutori wenhau uye Milo. Sekureva kwaCoronado-Morón and unto. kubva kuYunivhesiti yeMalaga, "Tintin inyaya yekufananidzira yevechidiki ma comics akakonzera hunhu hwevechidiki uye vachiri kuyaruka vezvizvarwa zvakasiyana". Kwete pasina icho chakava a rakakosha basa mukati meiyo genre.
Albums Kuvengwa kwaTintin
Chinyorwa chiri mundima dzinotevera chinopa marongero enhoroondo zvichienderana nekutaridzika kwekutanga (zvimwe zvigadzirwa zvakavhiringidzwa nekuda kwemauto uye / kana zvikonzero zvemunhu). Zvakare Matunhu anoshanyirwa naTintin anotaurwa aine zvimwe zvinoreva bhuku rega rega. "Nguva dzose, nyika chaidzo nemaguta uko kutaurirana uye hushamwari zvakagoneka" (Coronado-Morón et al., 2004).
Tintin muNyika yeSoviet 1929 - 1930
Tintin naSnowy vanopinda mumoyo weUSSR, vachiratidzazve kutsamwa kwehutongi hwechiKomonisiti. Nguva yepamusoro yemutambo yaive nemumiriri wayo nekusvika nechitima kuBrussels ye mukomana scout Makore gumi nemashanu. Iyo staging yekudzokera kwaTintin kuBelgium yakaitika muna Chivabvu 30, 1930 uye yakaratidza kubudirira kwenyaya.
Tintin muCongo 1930 - 1931
Imwe yemapikisheni aHergé ane nharo zvakanyanya nekuda kwekuona kwake kusagadzikana kweBelgian colonialism mu Africa uye kunyanyisa kushandiswa kwemifungo.. Rwendo rwaTintin muCongo runounza hunhu hwemunhu hunoshamisa uye hunoshamisa, paanozopedzisira abatanidzwa nekugadziriswa kwemhosva yepasi rose. Mukupesana, kurondedzerwa kwakatsoropodza kwekutengeswa kwepasi rose kwezvinodhaka nekutengesa maoko kunowedzera nharo dzakagadzirwa naRemi.
Tintin muAmerica (1932)
Kubudirira kweichi comic kunopa maviri makuru misiyano. Kune rimwe divi, Tintin anoputsa rese renyika dzese tsotsi sangano rinotungamirwa naAl Capone anobva kuChicago. Kune rimwe divi, kubviswa kwevaRed maIndia ekupedzisira kubva kuminda yavo yekutanga nekuda kwekuwanikwa kwemafuta kunonzi kunokanganisa. Nekudaro, iyo nzvimbo yechisikigo iyo yaimbova huswa inoshandurwa kuita guta rinotyisa rekongiri.
Fodya yaFarao 1933 - 1934
Izvo zvinoitika munzvimbo nhatu dzekunze dzakashanyirwa naTintin naSnowy vega vega uye kwete pakomisheni yebasa: Egypt, India neChina. Mune ino albha, vatambi vaHernández naFernández vanoita yavo yekutanga uye anopikisana nemabhiridha villain Rastapopoulos anoonekwa aine kukosha kukuru.
Iyo Blue Lotus (1934)
Inotariswa nevazhinji vateveri vebhuku renyambo sehunyanzvi. Remi aivimba nekukosha kwekunyora kwakabatana kwemudzidzi weChinese Zhang Chongren kuti agadzire. Musimboti wenyaya yake wakatsvaga kubvisa rusaruro rwekuMadokero kumaChina uye nekushoropodza pachena hutongi hweJapan muChina.
Yakavhunika nzeve 1935 - 1937
Remi akafuridzirwa neChaco Hondo iyo yaikwikwidza Bolivia neParaguay (inonzi San Theodoros neNuevo Rico, zvichiteerana) pakati pa1932 - 1935. Hergé akaumbawo rudzi rwevaAmerindian - Arumbaya - uye anowedzera mumwe mukurumbira kumushamarari, General Alcázar. Nenzira iyi, akaenderera mberi nekupokana kwekushanduka uye kusimba mukuongorora kweanthropological uye kwekuchera matongo kwakaratidzirwa mune akatungamira maalbum.
Sekureva kwaBarragán (2008), “… kana iri nyaya yeSouth America, hapana mubvunzo kuti zvinowirirana nezviitiko zvemutori wenhau mudiki satire inotyisa yakavakwa. kurwisana nehondo yechisimba iyo yakakonzera kudzima kubuda kwehutongi hwechokwadi hwakabvumidza kukunda nhoroondo dzehurombo uye kudzura ".
Chitsuwa chechitema (1937 - 1938, 1943 na1965)
Nekuda kwekukanganisa kwayo kwekumisikidza, matatu edhisheni aidiwa pakuburitswa kwekupedzisira kweiri albhu muna 1965. Izvo zviitiko zvinoitika muScotland, zvine zvirevo zvisina tsananguro zvinopesana nekuwedzera kwaHitler mumazuva pamberi peHondo Yenyika II. Iye akaipa ndiDkt Müller, wekuGerman kwakatangira, pakati penyaya yakanangana neuspionage.
Tsvimbo yaOttokar (1938 na1947)
Mune ino albham, Remi anoenderera mberi nekushoropodza kuwedzera kweNazi nekuda kwekumanikidzwa kupinda muAustria (1937) neCzechoslovakia (1938) kuenda kuTatu Reich. Kufananidza kunowanikwa nehumambo hwekufungidzira hweSyldavia, hwakaunganidzwa neBolduria nekuda kwekuda kwemudzvanyiriri Müsstler (Mussolini - Hitler). Zvimwechetezvo, Syldavia yaive yakakosha mune mamwe maalbamu, pamwe nekuonekwa kwemukadzi mukuru wesaga, Bianca Castafiore.
Munyika yegoridhe dema (1940, 1949 uye 1971)
Kuburitswa kweiri rwiyo kwakakanganiswa nekupinda kweGerman muBelgium. Hergé akakwanisa kutangazve nyaya iyi kwapera makore gumi uye akawedzera zvimwe zvacho muchinyorwa chekupedzisira cha1971.Muchinyorwa chekutanga, zviitiko zvinoitika muPalestine, asi chikamu chekupedzisira chinoitika munyika yekunyepedzera yeArabhu, Khemed. Vaviri vanokosha vatambi vanounzwa ipapo: Emir Mohammed Ben Kalish Ezab uye dangwe rake, Muchinda Abdallah.
Gakanje rine nzara dzendarama (1940)
Yakanga iri yekutanga yemakakatanwa maalbum akaburitswa naHergé wepepanhau Manheru, inodzorwa nevaGerman vanogara muBelgium munguva yehondo. Iyo inoratidzira kutanga kweiyo iconic Kaputeni Haddock, uyo anozoramba achienderera kuve anokosha akakosha hunhu mune yakasara saga.
Nyeredzi isinganzwisisike (1942)
Yaive yekutanga yeavo maalbham kuburitswa muvara. Inotaurira nezvekutsvaga kwemeteorite nemapoka maviri anokwikwidza esainzi - eEuropean neAmerica. Muimbi mukuru wealbum, Blumenstein, akakonzera kushoropodzwa kukuru kwaHergé nekuda kwehunhu hwechiJuda. Kunyangwe (kuwedzera kutuka mukukuvara), anopikisa akazotumidzwazve zita rekuti "Bohwinkel", zvakazove zita rekuti nemidzi yeSemitic.
Chakavanzika cheiyo unicorn 1942 - 1943
Tintin, Snowy naHaddock vanoenda kunzira yechirahwe chakasiiwa natateguru wemutungamiriri wezana ramakore rechiXNUMX, knight Francisco de Hadoque. Kugadziriswa kwacho kunogona kuvatungamira kupfuma yaRed Rackham. Neichi chikonzero, ivo vanofanirwa kuunganidza matatu akafanana mamodheru echikepe cheiyo knight, zvisinei, mamwe ane ngozi kwazvo uye vasina hunhu matsotsi anoteedzera zvakafanana chinangwa. Iri zita rakazogadzirwa kuita bhaisikopo naSteven Spielberg.
Rackham iyo Tsvuku Pfuma 1942 - 1943
Remi akaunza mune iri basa mucherechedzo Muzvinafundo Silvestre Tornasol, zvichibva pa physiognomy yechiremba anozivikanwa Auguste Piccard. Hunhu hunhu hwakatsausa uye husina kujeka musayendisiti uyo angaite mukurumbira kuonekera mune dzimwe nyaya. Zvinotoshamisa kuti hupfumi hwakatsvakwa naTintin neshamwari dzake mune ino albam iri muMoulinsart Castle, yaive nemadzitateguru aCaptain Haddock.
Mabhora manomwe echristal (1943 - 1944 uye 1946 - 1949)
Tintin anodzokera kuSouth America kuti azive nezve kutukwa kwaRascar Capac, kwakadonha pane vanochera matongo avo vaiongorora guva reInca. Panguva yekuburitswa kweiri rwiyo Hergé akapomedzerwa kakati wandei wekubatana nevaNazi. Zvisinei nekukanganisa kukuru, hazvirambike kuti iri ibasa rinoshamisa kubva pane yakatarwa maonero.
Panyaya iyi, Barragán (2008) akataura kuti "… kuomarara mukuferefeta kwechinyakare uye kwekuchera matongo kwechikwata chakatungamirwa naHergé mucherechedzo wekufarira kwavo kutora nhaka yetsika dzemarudzi aya anga achiramba ari kupamba vanhu. European intelligentsia. " Naizvozvo, ichi chiratidzo chakajeka cheHergé "chakanyanya kuzvitsoropodza" maitiro.
Target: Mwedzi (1950 na1951)
Yakanga iri yekutanga bhuku rakagadzirwa neHergé Zvidzidzo, imomo, aive nechikwata chakanakisa chevashandi vaitungamirirwa naBob de Moor. Iyo inyaya yesainzi nyaya inoenderana neyemuchadenga nhangemutange yenguva yaida kuwanda uye kwakadzama kuferefetwa. Kusvika padanho rekuti munyori weBelgian aifanira kukanganisa basa rake kwemwedzi gumi nemasere pakati pa18 na1950 nekuda kwekuneta mumuviri nepfungwa.
Kumhara paMwedzi 1952 - 1953
Iyo rondedzero inoenderera mushure mekuvakwa kwedombo remagetsi renyukireya rakapedziswa nechikwata chaDr. Calculus muhumambo hweSyldavia. Ipapo, Tintin, Snowy, Haddock, Tornasol uye, vanozvidaidza, Hernández naFernández vanotora rwendo rwunovatora kutsika mwedzi. Izvo zvakakosha kuti uzive kunakidza uye kwakawanda kufanana kwakaitika pakati penyaya yaHergé uye chaicho basa raApollo XI makore gumi nematanhatu gare gare.
Iyo Calculus nyaya 1954 - 1955
Iyo ingano yeuspionage yakanangana nehondo inotonhora. Remi anotora muoni kudzokera kurudzi rwekufungidzira, Borduria, pasi peye ironclad autocracy yemudzvanyiriri wechiKomonisiti saStalin. Chikamu chechirongwa chayo chinoitika kuGeneva, Switzerland, uye hunhu hunokosha hunovonekwa, senge rakamonyorwa Colonel Sponsz.
Coke stock (1956 - 1958 na1967)
Tintin anodzokera kuKhemed, nyika yekunyepedzera yeArabhu. Kunyangwe iyo nharo yakamisikidzwa zvakajeka kupokana nehuranda nekutengeswa kwemaoko, Remi akagashirwazve nekuda kwekufungidzira kwevanhu vemuAfrica. Kunyanya, chinangwa chaive chekushora matambudziko akatambudzwa nevaAfrica maMuslim panguva yavo yekushanya kuenda kuMecca. Muchinyorwa cha1967, dzimwe ndima dzinobviswa uye nemarondedzero anoita vanhu anosandurwa.
Tintin muTibet 1958 - 1959
Pakazoburitswa dambarefu iri, mukurumbira waTintin wanga wasvika pakukosha kwepasi rese. Iyo katuni inoshora mamiriro ezvinhu muTibet, iyo yakapambwa neChina muna 1949 uye yakatungamira kuutapwa kweDalai Lama muIndia. Iyo nyaya inoratidza Tintin achida kuisa hupenyu hwake panjodzi kuti aponese shamwari yake Tchang (kubva Iyo Blue Lotus).
Zvishongo zveCastafiore 1961 - 1962
Zviitiko zvinoitika kumba kwaCaptain Haddock, Moulinsart Castle. Iyo chete ndiyo album mune saga isingataure nezverwendo uye iro zano harina chakavanzika chinofanira kugadziriswa. Zvisinei, yakagamuchirwa zvakanaka nevateveri veakateedzana. Zvakaenzana, Remi akarumbidzwa nekuratidzwa kwake kwakakodzera kwema gypsies.
Ndege 714 kuenda kuSydney 1966 - 1967
Mumeso evazhinji vateveri venhevedzano, inomiririra albam yaTintin inehurombo. Zvisinei, ine ine dzimwe nhau dzinonakidza, kunyanya panguva yekubudiswa kwayo. Iyo inorondedzera kuoneka kwezvimwe zvisikwa zvekunze, pamwe nekukanganisa kutsva kweanopenga Rastapopoulos uye mavara maviri matsva, Laszlo Carreidas naMik Ezdanitoff.
Tintin nevano rogues 1975 - 1976
Mutori wenhau weBelgian neakavimbika Fox Terrier anodzokera kuSan Theodoros, kwaanosangana nevanhu vasingakanganwike kubva Yakavhunika nzeve. Mune ino chinyorwa, mufananidzo we protagonist wesaga inoshandurwa zvinoenderana nefashoni yenguva, iine mabhurukwa ejeans-dhizaini. Uye zvakare, Tintin anopfeka ngowani ine mucherechedzo werunyararo uye anova murapi weyoga.
Quote naGeorges Remi (Hergé).
Tintin uye iyo Alfa Art
Zvekujekeswa kweiri dambarefu, Hergé akaita zvinyorwa zvakawandisa zvehunyanzvi zvaiitwa panguva yake yekupenda. Tintin uye iyo Alfa Art inotarisa pakutsvaga kwakatenderedza hunyanzvi hwazvino uye ungano dzezvitendero Zvinosuruvarisa, Remi akatadza kupedzisa basa iri nekuti hutano hwake hwakakanganiswa zvakanyanya neleukemia.
Georges Prosper Remi akafa muWoluwe-Saint-Lambert, Brussels, Belgium, musi wa3 Kurume 1983. Chirikadzi yemunyori, Fanny Vlamnick, akagashira kodzero dzese kumunhu Tintin uye zvese zvemitambo yake. Ndiani aive mukadzi wechipiri waHergé akasarudza kuburitsa Tintin uye iyo Alfa Art muna 1986, sekusiiwa kwaakaitwa nemurume wake mushakabvu. Parizvino, Vlamnick ndiye mugari wenhaka weRemi wepasi rose uye anotarisira pfuma yake kuburikidza neHergé Foundation.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Kuvengwa kwaTintin
Imwe yenyaya. Anthologies, zvekare uye zvemhando dzakasiyana